चुट्किला पढौं खुलेर हासौंः शेरेको तपस्या - Everest Dainik - News from Nepal
चुट्किला पढौं खुलेर हासौंः शेरेको तपस्या
एकदिन शेरे भगवानको तपस्या गर्दै रैछ । अचानक भगवान प्रकट भयछन अनि भनेछन ।
भगवानः तँ के चाहन्छस् माग ?
शेरेः एउटा जागिर, ठुलो गाडी र त्यसमा धेरै केटी नै केटी’ !
भगवानः तथास्तु !
विचरा शेरे आज एउटा गल्र्स होस्टेलमा बस ड्राइभर छ !
याे पनि पढ्नुस रमाइलो चुट्किलाः हतारमा सालीकै कट्टु लगाएछु !